China EDDHA-Fe6% orinasa sy mpamatsy | Lemandou
Zezika vy voadio voajanahary, EDDHA Fe, no mahomby indrindra hisorohana sy hanasitranana ny aretin'ny ravina ravina noho ny tsy fahampian'ny vy amin'ny voamaina, voly, voankazo, legioma ary voninkazo sns.
pH (vahaolana 1%)
Metal mavesatra (Pb)
Satria zezika bitika bitika bitika bitika be tsy misy rano be dia be miaraka amin'ny famoahana vy haingana dia haingana EDDHA Fe dia azo ampiasaina amin'ny tany maro am-pilaminana sy mahomby.
Izy io dia mety ho mpamatsy vy ny voly mahazatra, mampitombo azy ireo tsara kokoa, ary manatsara ny habetsahan'ny vokatra sy ny kalitaon'ny vokatra. Nisy ihany koa ny fanatsarana lehibe ny tany nihamafy sy nihavitsy. Azo ampiasaina hifehezana ireo aretina toy ny "aretin'ny ravina mavo" sy "aretin'ny lobular"
Kitapo Kraft: harato 25 kg miaraka amin'ny valin'ny PE
Vata boaty: kitapo foil 1 kg isaky ny boaty miloko, boaty miloko 20 amin'ny baoritra
Amponga: baoritra baoritra 25 kg
1. Fampiasana ranon-drano: Arotsaho amin'ny rano kely aloha ny EDDHA Fe, ary avy eo ampio rano sahaza azy raha ilaina. Mihady lavaka 15-20 cm manodidina ny satroboninahitry ny hazo fihinam-boa na amin'ny lafiny roa amin'ilay zavamaniry. Arotsaho ao anaty hady ireo vahaolana ary fenoy eo noho eo. Ny habetsaky ny rano ampiana dia miankina amin'ny vahaolana izay azo zaraina mitovy amin'ny hady ary hiditra ao amin'ny faka.
2. Fantsom-panafody mitete sy fanosotra rano: ampidiro matetika amin'ny rano fanondrahana, atsofohy amin'ny rano, ny isan'ny fampiharana dia miankina amin'ny hamafin'ny tsy fahampian'ny vy, mitombo na mihena ny habetsany mety, ny fatra dia 70-100 grama isaky ny mu.
3. Famafazana ravina ravina: araraka amin'ny rano 3000-5000 fotoana ary apetaho.
4. Ho toy ny akora ilaina amin'ny zezika ravina ravina, zezika fanosotra ary zezika mitambatra: EDDHA Fe dia azo totohina tsara ao anatin'ny faritry ny 3-12 ao anaty tany. (Arakaraka ny maha-avo ny sandan'ny PH, ny EDDHA Fe dia mifandraika amin'ny vy voadio EDTA sy ferrous sulfate Ny tombony miharihary), raha tsy fohy ny rano sy ny zezika fototra, ny vokatra azo avy amin'ity vokatra ity no ho tsara indrindra. Satria ny tsy fahampian'ny karazana zezika iray dia hiteraka tsy fahampian'ny zezika manara-penitra hafa koa, ny tsy fisian'ny zezika dia tokony ho faritana alohan'ny hampiharana azy, ary azo ampiharina miaraka amin'ireo zezika bitika hafa toy ny zinc, manganese ary magnesium. EDDHA Fe dia azo tehirizina mandritra ny fotoana maharitra amin'ny maripanan'ny efitrano, fa noho ny fahafahan'ny mpampiasa dia asaina mitahiry azy amin'ny toerana maina, ary ny fonosana dia tokony hasiana tombo-kase mafy aorian'ny fotoana iray.
5. Torohevitra manam-pahaizana: hazo fihinam-boankazo: apetaho indroa amin'ny tsingerin'ny voankazo, ny voalohany dia ny vanim-potoanan'ny ravina vaovao, ary ny faharoa dia rehefa latsaka ny voninkazo. Ny tahan'ny fampiharana voalohany dia 30 grama isaky ny zavamaniry, ary ny tahan'ny fangatahana faharoa kosa dia antsasaky ny fatra; 1 grama an'ity vokatra ity no ampiana rano 0,5 litatra, ary avy eo apetraka amin'ny fotony, andramo atao zezika mitovy ny fakany.
Zavamaniry leguminous: apetaka indroa amin'ny tsingerin'ny voankazo, ny voalohany dia ny vanim-potoanan'ny ravina vaovao, ny faharoa dia rehefa latsaka ny voninkazo; ny tahan'ny fampiharana voalohany isaky ny mu dia 250 g-500 g, ary ny fatra faharoa amin'ny fitafiana ambony dia mihena roa. Arakaraka ny tahan'ny 1 grama an'ity vokatra ity amin'ny rano 0,5 litatra, esory amin'ny rano madio tanteraka ilay vokatra, ary avy eo esory amin'ny ravina.
Zavamaniry haingoina: manondro ny fampiasana sy fatra ny legume, ary apetaho indray mandeha mandritra ny vanim-potoanan'ny ravina vaovao.
Ny fambolena hafa dia tokony hampiasaina amin'ireo fomba fampiasana etsy ambony. Amin'ny ankapobeny, ny habetsaky ny fampiasana, ny tsara kokoa ny vokany, fa tsy be loatra.
1. Ny fotoana famafazana dia tokony hisorohana ny hafanana sy ny hazavan'ny masoandro, ary aza manondraka zezika vy hafa aorian'ny famafazana.
2. EDDHA Fe dia manana zavatra mahavelona be, mora ny mandray ny hamandoana amin'ny rivotra ary miteraka fihenam-bidy, saingy tsy hisy fiatraikany amin'ny kalitaony.
3. Ny fisehoana sy ny lokon'ny EDDHA Fe dia miovaova noho ny pH sy ny hatsarany, saingy tsy misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny anatiny amin'ny vokatra.
Manaraka: Potassium Fulvate